Ngwọta akpaghị aka maka itinye akwụkwọ nrapado
by Delta Injinịa / Fraịde, 27 Febụwarị 2015 / bipụtara Azịza omenala
Akpaka ngwọta maka ngwa nke nrapado engineered iji hụ kpọmkwem na ezi dosing nke ngwaahịa. Nke a na - enye aka na ikwughachi na usoro nrụpụta na - achịkwa.
Elu elu tupu ọgwụgwọ na dosing
Plasma pre-treatment and dosing of 2 MMA gluu nke akụkụ di iche-iche
A na-ehicha akụkụ abụọ ahụ aka ma tinye ya na ebu. Mgbe agbaghachara “mbido”, akụkụ abụọ ahụ abanye na nrụnye, ebe a na-agwọ ha abụọ na plasma (Tigres). A na-etinye gluu ahụ n'akụkụ ala. Akụkụ abụọ a na-apụ na nwụnye a ga-eji aka zukọta.
Akpaghị aka gluu dispensing
Semi-akpaka ngwa nke reactive ala gbazee gluu na seramiiki akụkụ
A na-eji aka gị rụọ akụkụ abụọ ahụ n'ime igwe ahụ. A na-etinye ntụpọ nke gluu na 2 nke akụkụ seramiiki, yabụ onye na-arụ ọrụ nwere ike ịbanye ma tinye ihe ntinye n’elu ntụpọ gluu ahụ. Mgbe onye ọrụ na-apụ apụ, a na-etinye eriri gluu zuru oke ma akụkụ abụọ ahụ na-agbakọ.